Saacid oo ay Damjadiid ka Taqalustay! | KEYDMEDIA ONLINE
Saacid oo ay Damjadiid ka Taqalustay!
Keydmedia Online - Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Maanta oo Isniin ah 02 December 2013, Maalintii Sadexaad ka doodayay Mooshiin qaar ka mid ah Xildhibaanada ay ka soo gudbiyeen Xukuumadda RW Cabdi Faarax Shirdoon.
Keydmedia Online (KON) ayaa Aqristayaasheeda usoo bandhigeysay Wararka ugu dambeeyay ee Dooda ka socota Baarlamaanka Soomaaliya, si Toos ah (Live Blogging), waxaana soo tabinaayeen Labada Wariye ee Keydmedia Online u jooga Magaalo Madaxda iyo Wariyeyaal Madaxbanaan oo ku sugan Magaalada Muqdisho.
Xildihibaannada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Sadex Maalmood ka doodayay Mooshin ka dhan ah xukuumadda, waxaana mooshinka u codeeyay 184 Xildhibaan.
Mudanayaasha Baarlamaanka Somaliya ayaa Kalsoonidii kala noqday Ra'iisal wasaare Saacid iyo golihiisa Xukuumadda. 249 Xildhibaan ayaa Codeyneysay, waxaana diiday 65 Xildhibaan, 184 ayaa Ogolaatay Mooshinka. Mooshinkii waa Gudbay!
Gudoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Sh. Cismaan Jawaari ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu sii shaqeynayo inta uu Madaxweynuhu ka soo magacaabayo Ra’iisul wasaare cusub. Prof. Jawaari ayaa sheegay in Baarlamaanku uu ansixin doono in Saacid uu sii noqdo R/Wasaaraha KMG ah ee Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon ayaa Saakay sheegay inuu Aqbali doono go’aan walba oo kasoo baxa Kulanka Haarlamaanka.
Hoos waxaad ka Aqrisan kartaa Warbixinadii aan Labadii Maalmood kasoo tabineynay Golaha Shacabka.
Liiska Xildhibaannada Saxiixay Mooshinka
Xubnihii tirin lahaa Codadka oo la dhaariyay
Khilaafka Madaxda: Filim hore oo ay Jilayaan Atoorayaal Cusub
Mandhow Xagee Baad Noo Waddaa, Waan Xakaarnaye!
Baarlamaanka ayaa Kalsoonida kala laabtay RW Saacid!
Xukuumaddii waa la riday!
Mudanayaasha Baarlamaanka Somaliya ayaa Kalsoonidii kala noqday Ra'iisal wasaare Saacid iyo golihiisa Xukuumadda.
249 Xildhibaan ayaa Codeyneysay, waxaana diiday 65 Xildhibaan, 184 ayaa Ogolaatay Mooshinka. Mooshinkii waa Gudbay!
Wixii maantay dhacay waxaad ka Aqrisan kartaa Boggaan, wixii Faahfaahin ahnah waan idiin soo gudbin doonaa hadii alle idmo.
Keydmedia Online, Isniin - 15:32 PM - EAT:
Safka B oo ah kuwa diidan Mooshinka ayaa la tirinayaa hadda. Waxaana Saf kastaa la tirinayaa 2 Jeer si looga fogaado Qalad.
Keydmedia Online, Isniin - 15:22 PM - EAT:
Safka A, iyo Safka B ayaa loo kala saaray Xildhibaanada, Safka A oo ah kuwa keenay Mooshinka oo isticmaalaya HAA ayaa hadda la tirinayaa hadda. Safka A dhamaan way u codeeyeen.
Keydmedia Online, Isniin - 15:17 PM - EAT:
Codka Kalsoonida ayaa hadda la guda gali rabaa, waxaana Xildhibaanada Taageersan in la rido RW Saacid ay adeegsanayaan Erayga ah HAA, halka kuwa kale ay adeegsanayan MAYA.
Keydmedia Online, Isniin - 15:10 PM - EAT
Hadda, waxaa soconaya Tirinta Xildhibaanada doonaya in Codka Kalsoonida loo qaado iyo kuwa kasoo horjeeda, waxaana dhici doonta in Codka loo qaado Xukuumadda haddii ay badato Xildhibaanda Taageersan in la rido Xukuumadda.
Prof. Jawaari ayaa waxa uu tirinayaa Xildhibaanada soo xaadiray Kulanka si loo xaqiijiyo Xildhibaanada jooga Xarunta Golaha Shacabka, si looga fogaado inuu Qalad dhaco.
Gudoomiyaha, ayaa sheegay in 250 Xildhibaan inay joogaan Kulanka, islamrakaana hadda Codka Kalsoonida loo qaadayo RW Saacid.
Keydmedia Online, Isniin - 14:40 PM - EAT
Codeeynta Mooshinka Raiisul Wasaare Shirdoon oo bilaabatay, waxuuna Gudoomiyaha yeerinayaa Magacyada Xildhibaanada.
Keydmedia Online, Isniin - 14:20 PM - EAT
Waxaa Daqiiqadaan bilaabatay Cod qaadistii
Keydmedia Online, Isniin - 14:10 PM - EAT
In ka badan 20 Xildhibaan, ayaa kusoo biiray Safka kuwa Taageersan RW Saacid, iyadoo Xarunta Baarlamaanka uu ka socdo Kulan Xasaasi ah, oo looga doodaya Moshinka laga keenay Xukuumada.
Mid kamid ah Xildhibaanada oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in Markii uu saxiixayay mooshinka laga keenaya Xukuumada, balse hadda ay ogaadeen in Khilaafka uu yahay mid u dhaxeeya RW iyo Madaxweynaha.
Gudoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in Maanta lasoo gaba gabayn doono, oo Codka Kalsoonida loo qaadayo Xukuumada.
Xildhibaanada ayaa sheegaya in Mooshinkan uu yahay mid aan kasoo bixin ama ka yimid Gudaha Baarlamaanka, oo laga soo abaabulay Xafiiska Madaxweynaha.
Keydmedia Online, Isniin - 10:40 AM - EAT
Waxaa Goor-dhow si rasmi ah uga furmay Xarunta Golaha Shacabka ee Muqdisho, ka Doodista Mooshinta muranka uu ka taaganyahay ee laga keenay RW Saacid iyo Xukuumadiisa.
Xildhibaanada soo xaadiray oo gaaraya 224 Mudane, ayaa waxaa Maanta lagu wadaa inay soo afjaraan ka doodista Mooshinka horyaalla Baarlamaanka,iyadoo Maanta ay hadal jeedinaya 50 Xildhibaan oo kiiba 3 Daqiido la siiyay inuu ku dhiibto Fekerkiisa ku aadan Mooshinka,
Waxaa suuragal tahay in Xildhibaano kale ay fadhiga dib kusoo biiraan, laakiin inta uu shaaciyay Guddoomiyaha ayaa ah 224.
Amaanka ayaa si aad ah loo adkaynayaan,waxaana Xarunta ku wareegsan Ciidamada Df iyo kuwa AMISOM.
Keydmedia Online, Isniin - 09:50 AM - EAT
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa Maanta oo Isniin ah 2 December 2013 lagu wadaa in ay Maalintii 3-aad ka doodaan Mooshinka laga keenay RW Cabdi Faarh Shirdoon “Saacid”.
Sida uu sheegay Gudoonka Baarlamaanka, Kulanka, ayaa furmi doona 10:00 a.m, waxaana laga yaabaa in hadii Doodda ay bilaabato xilli hore ay dhamaato Maanta, oo Codka Kalsoonida ah u qaadaan Xukuumadda Federaalka ah.
Doodad, ayaa waxa ay noqotay mid daba dheeraatay, oo tan iyo Sabtidii lasoo dhaafay ay Xildhibaanada si aad ah uga doodayeen Mooshinka ka dhanka ah RW Saacid, waxaana Mooshinkaan uu noqday mid Muran badan dhaliyay islamarkaana Baarlmaanka oo dhan gil gilay.
Keydmedia Online, Axad - 14:55 PM - EAT
Kulankii Baarlamaanka oo Xirmay
Kulanka waa uu xirmay, waxaana hadlay 33 Xildhibaan, 47 kale ayaa lagu balnsanyahay inay hadlaan Beri 10:00 A.m. Subaxnimo, sida uu sheegay Prof. Jawaari.
Bari ayaa laga yaabaa in RW loo qaado Codka Kalsoonida.
Keydmedia Online, Axad - 14:25 PM - EAT
Dooda wali waa ay socotaa, waxaana ay mareysaa Heer Gabo Gabo ah, waxaa laga yabaa in RW loo qaado Codka Kalsoonida maalinta berri oo Isniin ah, haddii uu maanta suurtagali waayo.
Xildhibaannada Saxiixay Mooshinka oo Khudbad ka jeediyay Baarlamaanka ayaa Xukuumadda RW Saacid ku eedeeyay Waxqabad la'aan iyo Waqti lumis. Dhanka kale, Xildhibaanadda Taageeraya RW Saacid ayaa sheegay in hadii Xukuumadda la rido uu Waqti Qaali ah ka lumayo Dalka, waxeyna sheegeen in Xildhibaanadda Saxiixay Mooshinka la Iibsaday.
Keydmedia Online, Axad - 13:45 PM - EAT
Xildhibaanada ayaa dib ugu soo laabtay Xarunta Golaha Shacabka kadib Salaad iyo Qado ay ku maqnaayeen, waxaana dib loo bilaabay Khudbadaha.
Keydmedia Online, Axad - 13:00 PM - EAT
Doodi Baarlamaanka ayaa waxaa la galiyay Hakad Qado iyo Salaad, waxaana la isku soo noqoon doonaa Galabta.
Keydmedia Online, Axad - 12:38 PM - EAT
Doodi Moshinka ayaa bilaabatay
Keydmedia Online, Axad - 12:37 PM - EAT
Sida ay noo Xaqiijiyeen Xildhibaanno aan la xiriirnay, Baarlamaanka ayaa ka dooday Codsi RW Saacid ka yimid oo ahaa in uu horyimaado Baarlamaanka, Khudbadnah ka jeediyo.
141 Xildhibaan ayaa kasoo Horjeestay Codsigaas
8 Xildhibaan ayaa ogolaatay
75 Xildhibaan wey ka aamuseen
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa ku dhawaqay hadda in RW Saacid uusan imaan Karin Xarunta Golaha Shacabka kadib markii Tirada diiday in Ra’iisul Wasaaraha uu yimaado Baarlamaanka ay ka bateen kuwa ogol.
Keydmedia Online, Axad - 12:31 PM - EAT
Shaqaalaha RW Saacid oo wada Olole
Shaqaalaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, intooda badan ayaa haatan ku sugan Xarunta Golaha Shacabka, waxeyna wadaan Olole Xildhibaanno ay kusoo jiidanayaan.
Keydmedia Online, Axad - 12:14 PM - EAT
Sidaan Hoos kusoo Qornay, waxaa jira Xildhibaanno badan oo ka laabtay Mooshinka ka dhanka ah RW Saacid. Xildhibaannadda intooda badan oo la "iibsaday" ayaa kadib markii la Shaaciyay Magacyadooda ka laabtay Mooshinka. Hiiraan Online iyo Keydmedia ayaa Shalay Galab shaaciyay Magacyadda Xildhibaanadda Saxiixay Mooshinka (Kor baad ka Aqrisan kartaa).
Keydmedia Online, Axad - 11:57 AM - EAT
Saacid oo loo diiday inuu Hortago Baarlamaanka!
RW Saacid, ayaa loo diiday inuu Hortago Baarlamaanka, si uu uga Jawaabo Eedeymaha ay usooo jeediyeen Qaar ka tirsan Xildhibaanada, oo hadda kulan uga socda Xarunta Golaha Shacabka ee Muqdisho.
Xildhibaan Xoosh Jibriil, oo kamid ah Xildhibaanada sida weyn ugu ololeynaya in la ridi RW Saacid, oo Hadal ka jeediyay Kulanka, ayaa waxa uu sheegay inaysan Sharci ahayn in RW Saacid uu yimaado kulanka.
Xildhibaano kale ayaa qabo inay Sharci tahay in RW Saacid uu yimaado Kulanka sii isku difaaco.
Keydmedia Online, Axad - 11:44 AM - EAT
Xarunta Golaha Shacabka waxa ka dhex socda Shukaansi iyo Olole ay wadaan Xildhibaanada taageersan RW Saacid oo doonaya inay iibsadaan Codadaka Xildhibaanada kale.
Kulanka ayaa waxa uu furmay 11:00 a.m., iyadoo ay soo xaadireen ku dhowaad 250 Xildhibaan.
Xildhibaan waliba oo 83-aad Xildhibaan kamid ah, wuxuu hadli doonaa muddo 3 Daqiiqo ah oo uu ka hadli doono Mooshinka iyo waxa uu ka qabo.
Waxaa jira Xildhibaano badan oo ka laabtay Mooshinka ka dhanka ah RW Saacid.
Keydmedia Online, Axad - 11:20 AM - EAT
Raisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon "Saacid" ayaa lagu wadaa in uu gaaro Xarunta Golaha Shacbiga oo looga doodayay Mooshinka ka dhanka ah Xukuumadiisa.
Saacid ayaa Khudbad ka hor jeedin doono Baaralamanka Soomaaliya, waxaana la adkeeyay Ammniga Xarunta.
Hortagida R/wasaaraha uu Baarlamanka hor tagayo ayaa waxaa Keydmedia Online u Xaqiijiyey Saraakiil ka shaqeeya Xafiiska R/wasaare Saacid.
Keydmedia Online, Axad - 08:12 AM - EAT
Xildhibaanada, ayaa ku kala aragti duwan Mooshinka ka dhanka RW Saacid, waxaan taas ay keentay inuu baaqdo kulankii Shalay kadib makii uu Buuq hareeyay Hoolka Shirka, Golaha Shacabka.
Shalay Baarlamaanka Soomaaliya waxa soo xaadiray Tiradii ugu badnayd oo ah 248 oo kamid ah 275 uu Baarlamaanka ka koobanyahay, marka loo eego fadhiyadii ugu danbeyay ee Barlamaanku yeelanayay.
Warar ayaa sheegaya inay jiraan Xildhibaano badan oo ka laabtay Mooshin ka keenista Xukuumada Ra’iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Ilaa 83-Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka, oo isugu jira kuwa keenay Mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul Wasaaraha iyo kuwa kasoo horjeeda Mooshinka ayaa isdiiwaangeliyay kuwaasi oo jeedin doona hadalo ku aadan mooshinka Baarlamaanka Horyaala.
Khilaafka Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka ka dhaxeeya ayaa soo afjarmi doona marka ay dhamaato dooda Xildhibaanada, oo Xukuumadda codka kalsoonida ah loo Qaado.